တရုတ်အညိုရောင် roller လေမှုတ်စက်ပိုမိုမြင့်မား Basic စက်မှုဇုန်ရေတန်း polyaluminium ကလိုရိုက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | JS
စက်မှုဇုန်တန်းမယ်လမင်း CAS 108-78-1 အမှုန့်
စိုက်ပျိုးရေးတန်းနှင့်စက်မှုတန်းပိုတက်ဆီယမ် sul ...
16-CAS 10043-52-4 anhydrous ကယ်လစီယမ်ကလိုရိုက် powderp ...
စိုက်ပျိုးရေးတန်းမဂ္ဂနီဆီယမ် sulfate anhydrous CAS 10 ...
အညိုရောင် roller လေမှုတ်စက်ပိုမိုမြင့်မား Basic စက်မှုဇုန်ရေတန်း polyaluminium ကလိုရိုက်
အညိုရောင် roller လေမှုတ်စက်ပိုမိုမြင့်မား Basic စက်မှုဇုန်ရေတန်း polyaluminium ကလိုရိုက် CAS 1327-41-9
ကျွန်တော်တို့ဟာပိုကောင်းပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါကထုတ်လုပ်ရန်ရရှိကြရလိမ့်တုံးနည်းပညာ, အထူးဘရောင်း roller လေမှုတ်စက်ပိုမိုမြင့်မား Basic စက်မှုဇုန်တန်း PAC ဖြစ်ပါသည်, 1993 ကနေ Poly လူမီနီယမ် Chloride အမျိုးမျိုးကြင်နာထုတ်လုပ်ခဲ့လေပြီတကား keyword: အညိုရောင် roller စက်မှုဇုန်တန်း Poly လူမီနီယမ် Chloride ။
CAS အဘယ်သူမျှမ .: 1327-41-9
GB ကို / T22627-2008
~ 30% သည် MIN 28%
အသက် 30 ~ 95
PH သည် VELUE
ဒါဟာ degerming ၏စွမ်းရည်, deodorization, defluorination, dechromisation, ရေနံဖယ်ရှားရေး, turbidity ဖယ်ရှားရေး, လူမီနီယံဖယ်ရှားရေး, လေးလံသောသတ္တုဆားနဲ့ရေဒီယိုသတ္တိကြွညစ်ညမ်းမှုကိုဖယ်ရှားရှိပါတယ်။ ဒါဟာ far- ရေအရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးကိုစင်ကြယ်စေ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အသုံးပြုမှုအထိသိရသည်။
2. စက်မှုဇုန်ရေ, စက်မှုလုပ်ငန်းမိလ္လာ, သတ္တုတွင်း reinjection ရေ, oilfield reinjection ရေ, သတ္တုမိလ္လာ, ကျောက်မီးသွေးအဝတ်လျှော်မိလ္လာ, သားရေမိလ္လာနှင့်ဓာတုမိလ္လာအမျိုးမျိုးတို့ကိုသန့်ရှင်းစေ။
3. စက်မှုထုတ်လုပ်မှု: စက္ကူ sizing, ဆိုးဆေးပုံနှိပ်ခြင်း, အရောင်ချွတ်ခြင်းနှင့်ဆေးဆိုး, ဆေးဝါးနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ။
အတုကျောက်မီးသွေးစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် 4, ကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူကျောက်မီးသွေးနှင့်ရေခွဲထုတ်အသုံးပြုသည်။
ထုပ်ပိုး: ကို double သဘောထားပြင်းထန် PP အိတ်နှင့်အတူ 25 ကီလိုဂရမ်။
ယခင်: အဝါရောင်မှုန်ရေမွှားလေမှုတ်စက်ပိုမိုမြင့်မား Basic စက်မှုဇုန်ရေတန်း polyaluminium ကလိုရိုက်
နောက်တစ်ခု: အဝါရောင်မှုန်ရေမွှားလေမှုတ်စက်ပိုမိုမြင့်မား Basic ရေဆိုးတန်း polyaluminium ကလိုရိုက် CAS 1327-41-9
ရေအဆင့် Polyaluminum Chloride သောက်သုံး
စက်မှုရေအဆင့် Polyaluminum Chloride
ရေကုသမှု Polyaluminium Chloride
အဝါရောင်မှုန်ရေမွှားလေမှုတ်စက်ရေ grad သောက်သုံး Fe ကိုလျှော့ချ ...
အဝါရောင်မှုန်ရေမွှားပိုမိုမြင့်မား Basic ရေဆိုးဂရမ်အခြောက်ခံစက်များ ...
အညိုရောင် roller ပိုမိုမြင့်မား Basic စွန့်ပစ်ရေအခြောက်ခံစက်များ ...
အဝါရောင်မှုန်ရေမွှားလေမှုတ်စက်ပိုမိုမြင့်မား Basic စက်မှုဇုန် w ...
ထုတ်လုပ်သူထောက်ပံ့ရေး High Quality Magnesiu ...
ဆိုဒီယမ် Stannate , Hypophosphorous အက်ဆစ် , Pac For Water Treatment, 2-Ethylanthraquinone , ရေကုသမှု polymer , 30% Polyaluminium Chloride ,